တီဗီပေါ်တွင် YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကို disable လုပ်နည်း | TeraNews.net
စာရေးသူ artem Published 07.12.2018
17-10-2020 အတွက် အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်လုပ်ထားသော ဖြေရှင်းချက် ရှိသည်- SmartTube နောက်တစ်ခု - ပိုပြီး!
လူတိုင်းကငွေကိုချစ်သောသူများနှင့်ယူကျု့ချန်နယ်ဖန်တီးသူ - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် built-in ကဗီဒီယိုကြော်ငြာအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်မဟုတ်လော ကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများအဘို့, developer များဟာအံ့သြစရာလျှောက်လွှာ AdBlock ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အန်းဒရွိုက်အတွက် Youtube ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့ဆော့ဝဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကို disable, ဒါပေမယ့်မြှင့်တင်ရန်တစ်ခုခု, မလက်ျာဘက်ပြုဖြေရှင်းနည်းများ။ သင့်ရဲ့ TV ပေါ်မှာ YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကို disable လုပ်နည်း - built-in စမတ်တီဗီနှင့်အတူတီဗီအားလုံးပိုင်ရှင်များအတွက်အရေးပေါ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို။
အဆိုပါအလိုဆန္ဒ, ထိုအဝေးထိန်းသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်နှင့်သည်းခံခြင်း - YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာတစ်ခုအဆုံးထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူအသုံးပြုသူအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအစုတခု။ အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုတီဗီစေဆိုတဲ့အချက်ကိုချက်ချင်းအသုံးမဖြစ်ပါတယ်။ သည် "မှတ်ဉာဏ်" ကိုရ, တီဗီအဟောင်း data တွေကိုဆွဲထုတ်နိုင်ပြီး YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုကြည့်၏ 1-4 နာရီကျော်ပိတ်ဆို့ကြော်ငြာဖော်ပြရန်။
TV ပေါ် YouTube ကြော်ငြာများကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
ဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုတွင်မဆို mode ကို, သတင်းစာက "Setup ကို» / « Settings များ»အတွက်တီဗီ။ အဆိုပါဖွင့်ပါခုနှစ်တွင် control panel ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအောက်ပါ sequence ကိုဖျော်ဖြေဖို့:
"အထွေထွေဆက်တင်များ" tab ကိုရှာပါကသွားပါ။
မီနူး "ကွန်ယက်" ကိုရှာပါနှင့်ထိုသို့သွားပါ။
"ကွန်ရက်က status ကို" ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကိုအပေါ် "ဆက်တင်များအတွက် DNS" ဟုအဆိုပါ cursor ချထားပါနှင့် "ကို manually ရိုက်ထည့်ပါ" ကို "ကိုအလိုအလျောက်ရယူ" ကိုအလံပြောင်းလဲသွား။
176.103.130.130: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံပေါ်နှင့်ဖွင့်လှစ်သော IP address ကို window ထဲမှာရိုက်ထည့်သော« DNS Server ကို "လယ်ကိုနှိပ်ပါ။
စာနယ်ဇင်း 'OK' နှင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု button ကို "ပြန်သွား" ကိုအသုံးပြုခြင်းက, control panel ကိုစွန့်ခွာ။
သင့်ရဲ့ TV ပေါ်မှာ YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ပုံ, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုမှလှည့်။ တီဗီကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာလိပ်စာ Adguard အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူလုပ်ရပ်တွေကို။ အဲဒီဗွီဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်သွားပါ, ဒါပေမယ့်တစ် Third-party server ကိုမှတဆင့်မည်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။ Adguard ရိုးရှင်းစွာလုပ်ကွက်ကြော်ငြာ။ အားသာချက်ရှင်းပါတယ် - ဗီဒီယိုကြော်ငြာမလိုအပ်သောမပြတ်တောက်လည်းမရှိ။
ဤချိန်ညှိချက်၏အားနည်းချက်မှာအသုံးပြုသူအားအလျှော့ပေးသည်။ YouTube ရုပ်သံလိုင်းမှခွင့်ပြုချက်သည်စကားဝှက်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ၏ server မှတစ်ဆင့် encrypt လုပ်ထားသောပုံစံဖြင့်ပို့သည်။ Adguard ကုမ္ပဏီသည်အသုံးပြုသူ၏အကျိုးစီးပွားကိုမြင်ပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းဇယားများကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ဒီနေရာမှာယူကျုးဘ်ပေါ်ရှိဗွီဒီယိုများကိုလုံခြုံမှုရှိခြင်း (သို့) အဆင်ပြေပြေကြည့်ရှုခြင်းကဘာလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသူအပေါ်မူတည်သည်။
PS 17-10-2020 တွင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် ရှိသည်- SmartTube နောက်တစ်ခု - ပိုပြီး!
ပြီးတော့ ဘီးကိုစုပ်ပြီး ကားကို ဆေးခြယ်ပါ- ATL က ကွန်ပရက်ဆာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
w2022bsit4-dns.com အရ XNUMX ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီများ
ကြံ့ခိုင်ရေးနာရီ Mobvoi TicWatch GTW eSIM
Xiaomi Mi Band7ကို ဝယ်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါ တယ်။
HUAWEI P5 Pro အတွက် 50G အိတ်
DAC Aune X8 XVIII နှစ်ပတ်လည်နေ့
Garmin Forerunner 255 နှင့် Forerunner 955 - ချို့ယွင်းချက်များကို လုပ်ဆောင်သည်။
HUAWEI PixLab X1 သည် အမှတ်တံဆိပ်၏ ပထမဆုံး MFP ဖြစ်သည်။
Huawei MatePad စာရွက်-3in 1 စာအုပ်၊ ဒိုင်ယာရီနှင့် တက်ဘလက်
Gigabyte Aorus 17X YE Gaming Laptop ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Lenovo Yoga 7000 သည် 8K ပရိုဂျက်တာဖြစ်သည်။